Wararka dhimashada Fazul Cabdalla, nin caynkee ah ayuu ahaa & sawiro+ Baasabooro – SBC
Wararka dhimashada Fazul Cabdalla, nin caynkee ah ayuu ahaa & sawiro+ Baasabooro
Warka Fazul Abdullah Mohammed ma ahan mid horey loo sii dhaaciyey, wuxuu ahaa war siyaabo kala duwan looga hadley oo isburin fara badan ay ku jirtey.
Dilkan oo dhawacay habeenimadii Arbcada 8-da fiidnimo waqtiga geeska Afrika waxaa la sheegay in labada nin ee la diley ay wateen baabuur nooca Totoya Surf ah waxaa la sheegay in ay ku soo dhaceen jidgooyo ay ku sugnaayeen ciidamada DFKMG oo ku taal agagaaraha xerada Asluubta ee ku taal wadada aada degmada Afgooye.
War laga soo xigtey saraakiisha ciidamada DFKMG waxay sheegeen in labada nin ay diideen inay istaagaan ka dib markii ciidamadu amreen in la joojiyo gaariga, balse ay diideen taasi oo keentey in ciidamadu isku hareereeyeen, waxaana markaasi ka dib ay labada nin ay bilaabeen inay rasaas ooda uga qaadaan ciidamada halka ay iyaguna rasaas ooda uga qaadeen gaarigaasi waxaana halkaasi ku dhintey labadii nin.
Abaanduulaha ciidamada DFKMG Jeneral C/kariim Yuusuf (Dhagobadan) ayaa isagu u sheegay saxaafada subaxnimadii dambe ee habeenkii weerarkaasi dhacay in ciidamadoodu ay dileen laba nin oo ka mid dagaalyahanka Shabaab oo mid ka mid ah uu yahay Ajanabi.
Taliska Military-ga Dawladu waxay ku sheegeen labada nin inay kala yihiin C/raxmaan Canadian oo sida la sheegay Shabaabka u qaabilsanaa gobollada Jubbooyinka halka midka kale uu ahaa Soomaali.
Abaanduulaha ciidamada DFKMG wuxuu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen hubkii ay wateen raggaan iyo waliba Passport-kii ninka Ajnabiga ah uu watay, wuxuuna tilmaamay in faahfaahin dheeraad ah ay hay’adaha ammaanku soo saari doonaan dhawaan, isagoo askarta howl galkaasi fulisay u sheegay in min hal darajo la dallacsiin doono.
Hadaba sidee lagu xaqiijiyey in qofka dhintey uu yahay Fazul Cabdalla ?
Abaanduulaha ciidamada dawlada KMG Jen. Cabdikariim Yuusuf Dhagabadan ayaa u sheegay wakaalada wararka AFP in ciidamada dawlada markii nimankaasi ay dileen ay ka heleen baabuurkooda qalab kala duwan oo ay ka mid yihiin mobilo, cumputerada Lap Top-ka, documenityo, daawooyin, & waliba lacag cadaan oo dhan 40 kun oo doolar.
Sarkaalkani wuxuu sheegay in baasaboor wadanka Koonfur Afrika ah oo uu ku qoran magaca Daniel Robinson
Dhinaca kale sarkaal ka tirsan laanta nabadsugida qaranka (NSS) ee dawlada KMG ayaa u sheegtey wakaalada wararka AFP in dheecaanka hidaha sidaha ee loo yaqaan DNA oo laga qaadey meydkaasi lagu ogaadey in qofka dhintey uu yahay Fazul Cabdalla, waxaana ay sheegtey haweenaydaasi in DNA-gaasi ay qaadeen bahwadaagta dawlada FKMG oo aanay sheegin si rasmi ah magacaasi.
Halima Aden, oo sida AFP sheegtey ah sarkaal sare oo ka tirsan NSS-ta waxay sidoo kale xaqiijisey in ciidamada dawlada markii ay dileen Fazul Cabdalla Maxamed ay haleen baasaboor wadanka Koonfur Afrika.
AMISOM oo ka shakisan jiritaanka qofka la diley
Laakiin afhayeen u haldey ciidamada midowga Afrika ka socda ee AMISOM wuxuu ka muujiyey shaki in qofka la diley uu yahay Fazul Cabdalla waxaana uu xusey in sawirada qofka meydka ah aanay laheyn muuqaalka Fazul.
Xogta ay haleen Booliiska Kenya
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Booliiska Kenya oo lagu magacaabo Matthew Iteere, ayaa u sheegay saxafiyiinta in loo soo sheegay in laba nin oo argagixiso ah sida taliyuhu sheegay lagu diley Soomaaliya arbacadii.
“Waxaa lagu xaqiijiyey inay yihiin Fazul Cabdalla & Cali Dheere, taasina waa mid aynu ka helayno dhigeenna(Booliiska Soomaaliya)” ayuu yiri Matthew Iteere.
Mareykanka oo xaqiijiyey geerida Fazul
Xoghayaha amuuraha dibada Mareykanka Hillary Rodham Clinton oo booqanaysa Afrika ayaa sabtidii iyadoo ku sugan magaalada Darasalam ee caasimada wadanka Tanzaniya waxay si buuxda u xaqiijisey dilka Fazul Cabdalla.
Clinton waxay sheegtey in geerida Fazul Cabdalla ay tahay dharbaaxo rasmi ah oo ku dhacdey Al-qaacida, iyo xagjiriinta bahwadaagta la ah & waliba hawlgaladooda Bariga Afrika.
“Tani waa dhamaadkii argagixiye sababay dhimasho badan & xanuun ku habsadey dad badan oo aan waxba galabsan, ee wax ku noqdey weeraradii safaaradaha” ayey hadalkeeda ku dartey Hillary Rodham Clinton .
Website-ka rasmiga ah ee laanta sirdoonka Mareykanka ee FBI-da qaybta argagixisada loogu doonista ama raadinta badan yahay (Most Wanted Terrorists) waxaa caawa la saarey sawirka Fazul Cabdalla in laga takhluusay calaamad muujinaysan, calaamadaasi oo la saaro dadka la qabto ama la dilo ee liiskaasi ka mid ah.
Hadaba waa kuma Fazxul
Fazul Abdullah Mohammed magaciisa Carabiga waa فاضل عبدالله محمد‎ waxaa muran uu ka jiraa taariikhda rasmiga ah ee uu dhashay waxaa jira warar sheegaya in isagu uu galiyey mugdi iyo shaki xiliga uu dhashay ka dib markii uu sameystey baasabooro iyo dhalooshiyin kala duwan waxaa la hayaa taariikho kala duwan sida in uu dhashay 25-kii bishii August sanadkii 1972, 25-kii February 1974, ama 25-kii December 1974.
Wuxuu ku dhashay deegaanka Mororni ee jasiiradaha Comoros ee ku yaal Badweynta gaar ahaan Bariga Afrika, wuxuu haystey dhalashooyinka Comoros & Kenya.
Fazul wuxuu si talantaali ah uga hadli jirey luuqadaha Faransiiska, Sawaaxiliga, Carabiga, English, Comorian.
Hawlgalada Al-Qaacida & Fazul Cabdalla
Si cad looma hayo xiliga rasmiga ah ee uu Fazul Abdullah Mohammed ku biirey shabakada Al-Qaacida, hase yeeshee warar dhanka sirdoonka ayaa sheegaya in uu kooxda ka mid noqdey sanadihii sagaashameeyadii.
Magaciisa wuxuu si rasmi ah ugu soo shaacbaxay Al-qaacida sanadkii 1998-kii xiligaasi oo la qarxiyey safaaradihii Mareykanku ku lahaa Kenya & Tanzania, waxaa ku dhintey 224 qof oo ay ka mid ahaayeen in ka badan 10 qof oo Mareykan ah.
Macluumaad dhanka sirdoonka oo la keenay maxkamad ku taal wadanka Kenya oo baareysay weeraradii qarax ee lagu qaaday safaaradahaasi waxaa la keenay cadeymo muujinaya in Fazul Cabdalla uu si toos ah ugu lug lahaa weeraradaasi isla markaana telefoonka gaarka ah ee Satellite-ka Cusaama Bin Ladin 16 jeer ay ku wada hadleen.
Xog dhanka sirdoonka ayaa cadeysay in maalmo ka hor weerarkaasi oo dhacay 7-dii August 1997 waxaa la ogaaday in Cusama Bin Ladin 16 jeer uu soo wacay Kenya.
10-kii Bishii October 2001 ayuu si buuxda ugu soo baxay liiska FBI-da Mareykanka ee dadka loogu doon doonista badan yahay waxaana madaxiisa la dul dhigey 5 milyan oo doolar oo ah abaalmarin cidii soo gudbisa xog lagu heli karo ninkaasi.
Laakiin warar dhanka sirdoonka oo aan ilaa iyo hada si buuxda cadeymo loo keenin ayaa sheegaya in Fazul xiligaasi ka hor uu ka mid ahaa shabakada Al-qaacida, iyadoo la sheegayo in uu ka mid ahaa koox ajaanib ah oo ka dagaalantey magaalada Muqdisho sanadkii 1993-kii xiligaasi oo ay dagaalamayeen xoogagii daacada u ahaa Jeneral Maxamed Faarax Caydiid & ciidamadii Mareykanku horseedka ka ahaa ee Qaramada Midoobay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Fazul uu kaalin kulahaa baabuur ay leeyihiin UN-ka oo Muqdisho xiligaasi qaraxyo loogu geystey & waliba in uu ku sugnaa Muqdisho 3-dii October 1993-kii xiligaasi oo xoogagii Jen. Caydiid ay dhulka soo dhigeen laba diyaaradaha khumaatiga u kaca ee Mareykanku lahaa, isla markaana ay dileen 18 askari oo Mareykan ah.
Lugtiisa looga shakinsan yahay ku lug lahaansha colaada Soomaaliya
Horaantii sanadkii 2007-dii intii lagu guda jirey colaada ka aloosan Soomaaliya waxaa la rumaysnaa in Fazul uu ku sugan yahay deegaano ku yaal xuduuda Soomaaliya & Kenya kuna dhaw Ras Kambooni, isagoo la rumaysnaa in uu halkaasi kula sugan yahay xubno ka mid ah xoogagii maxkamadaha Islaamiga ee laga saarey magaalada Muqdisho & Koonfurta Soomaaliya.
8-dii January 2007 diyaarad dagaal gaar ahaan nooca lagu magacaabo AC-130 ee wax duqeysa uuna leeyahay Mareykanka ayaa duqeymo ka geysatey deegaano ka tirsan dhulka keymaha ama jiqda ah ee Raaskambooni halkaasi oo la sheegay inay ku dhuumaaleysanyaan xoogag uu ka mid yahay Fazul Cabdalla.
Waaxda Gaashaandhiga Mareykanka ee The Pentagon waxay sheegtey in yoolka weerarku uu ahaa hogaamiye muhiim ah oo ka tirsanaa Al-Qaacida isla markaana gobolka u aqaabilsanaa fulinta hawlgalada.
Mareykanku waxay xiligaasi sheegeen in la diley Fazul Cabdalla isla markaana xogtaasi ay ka heleen saraakiil ka tirsan dawlada FKMG oo xiligaasi uu madaxweyne ka ahaa C/laahi Yuusuf Axmed. Fiiri warbixin SBC qortey 10-ki January 2007
Laakiin wareysi BBC-da qaybta dibadaha la hadasha uu siiyey xiligaasi safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya Michael Rannenberger wxuuu beeniyey in weerarkaasi duqeynta xaga cirka aan lagu dilin Fazul Cabdalla, isagoo tibaaxay in uu sii socon doono baadigoobka tuhunka sadexda nin ee Al-Qaacida ka tirsan.
Weerarkaasi duqeynta cirka ee Mareykanku geystey waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 70 qof oo shacab ahaa kuwaasi oo ahaa reer miyihi isla markaana tiro kale oo badan ay ku dhaawacmeen.
Mudo yar ka dib ciidamada xuduudaha Kenya waxay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah xaasaska Fazul Cabdalal iyo caruur ay dhashay iyagoo ka soo baxsanayey Soomaaliya waxaa lagu qabtey deegaanka Kiunga balse waxaa loo gudbiyey magaalada Nairobi halkaasi oo su’aalo lagu waydiiyey, waxaa laga helay haweenaydaasi computer-keeda gaarka ah balse la aaminsan yahay in uu lahaa Fazul macluumad muhiim ah oo lagu sheegay in uu watey “Xog muhiim ah oo la xiriirta tababarka argagixisada & macluumaadka dhanka sirdoonka oo dhabaha u xaari kara in la qabto Fazul, waxaa lagu sheegay xogtaasi in Fazul uu aad ugu wanaagsan yahay aalada Computer-ka.
Maalmo su’aalo waydiin ah waxaa haweenaydaasi & ilmihii ay dhashay dawlada Kenya u masaafurisay magaalada Muqdisho oo xiligaasi ay gacanta ku haysey dawlada FKMG ah & ciidamada Itoobiyaanka oo taageerayey.
Fazul & caleemosaarkisii Hogaamiyaha Al-Qaacidada bariga Afrika & Sarkaal sare Al-Shabaab
11-kdii November 11, 2009 xaflad balaaran oo caleemo saar ah oo lagu qabtey magaalada Kismaayo waxaa Fazul loo caleemo saarey hogaamiyaha Al-Qaacidada Bariga Afrika, isla markaana waxaa loo aqoonsadey sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Fazul khudbad uu ka jeediyey xafladaasi oo aheyd tii ugu dheerayd ee uu jeediyo wuxuu ka hadley oo uu si weyn u amaanay ninkii uga horeeyey xilkan ee uu badaley Salah Cali Nahban oo weerar ay geysteen ciidamada gaarka Mareykanka kana dhacay duleedka degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose 16 September 2009 lagu diley.Fiiri warbixin SBC ka qortey dilkii Saalax Cali Nabhan September 2009
Hadalkii uu ka jeediyey xafladaasi caleemo saarka Fazul Cabdalla wuxuu sheegay in uu u soo magacaabay hogaamiyaha Al-Qacidada bariga Afrika Cusaama Bin Ladin, wuxuu sheegay inay ku qaadi doonaan weeraro wadamada Soomaaliya dariska la ah, isla markaana dawlada Jibuuti lagu dhisey (Xukuumada Sheekh Shariif) ay si weyn uga horimaan doonaan.
“ILAAH ayaa mahad isla leh, idinka ALLE Soomaaliya ka dib waxaan gaarsiin doonaa dagaalkeena Kenya, Itoobiya & Jibuuti, waxaana Al-Shabaab & Al-Qaacida ay qaadi doonaan weeraro ka dhan ah wadamadaasi” ayuu ku yiri khudbadiisa Fazul sida lagu daabacay xiligaasi website-ka ku hadli jitey afka Al-Shabaab balse haatan hawada ka baxay.
Isbadal badalka wajigiisa & document-yada SafarkaFazul Cabdalla wuxuu ahaa nin ugu dheereeya adeegsiga document-yada wuxuu adeegsan jirey in ka badan 5 baasaboor, wuxuu safari ku tagi jiray isagoo la baadi goobayo wadamo fara badan.
Mid ka mid ah baasaboorada uu adeegsan jirey waxaa ka mid ahaa baasaboor wadanka uu u dhahsay ee Comoros Islands waxaa ugu qoran magaciisa rasmiga ah Fazul Cabdalla Maxamed wuxuu ku tagey baasaboorkaasi wadanka Suudaan sanadkii 1996-kii, xiligaasi waxaa la rumaysan yahay in uu Cusaama Bin Ladin kula kulmay halkaasi, waana sanad ka hor weeraradii ka dhacay Nairobi & Darasalam.
Si ku cad sawirkan baasaboorka Fazul oo ah xog laga helay waaxda socdaalka wadanka Suudaan waa xiligii uu tagey Suudaan.
Sidoo kale Fazul wuxuu adeegsan jiray Baasaboor Kenytaai waxaase ugu qornaa magaca Maxamed Abuukar Cali oo ku dhashay magaalada Garrisa, sida uu helay Telefishinka NTV ee wadanka Kenya.
Arimaha la yaabka leh ee soo baxaya waxaa ka mid ah safar uu ku tagey wadanka Koonfur Afrika bishii March ee sanadkna uun uga soo gudbey wadanka Tanzania, sida lagu xusey warsaaxaafadeed ka soo baxay dawlada FKMG Soomaaliya Fiiri Marqaati
Sidoo kale waxaa jirey warar sheegayey in uu tagey sanadkii 2007-dii Jasiirada Madagascar xiligaasi warar aan la hubin ayaa sheegaya in uu ka baxsadey dagaaladii maxkamadaha lagu jabiyey.
Wargeyska Midi Madagasikara ee ka baxa Jasiirada Madagascar wuxuu bishii February 2007 daabacay war sheegayey in Fazul Cabdalla uu ku sugan yahay magaalada Majunga oo ku taal waqooyiga Galbeed ee wadanka Majunga, xiligaasi wadankaasi ka aloosnaa kacdoon siyaasadeed, waxaana wargeysku uu qorey in uu deegaankaasi kula noolyahay haweenay uu qabo oo uga timid Jasiiradaha Comoros.
Juun 12, 2011 at 1:08 pm
aad ayaad u mahadsantihin SBC
Juun 12, 2011 at 3:34 pm
Amerika waxay ka fa idaysanaysa muslimko manta daciif ah iyo damir xumada kuwa muslimka sheganayo daba dhilifka u ah somali in badan o ka mida waxay aminsanyihin FB I iyo khiyal amerika insha allah mardhow amerika iyo xulufadeda tadmiir ayaa ku dhacaaya